Shiinaha Dabiiciga Muscovite warshad budada mica iyo alaab-qeybiyeyaasha | Huajing
Huajing fasalka la isku qurxiyo ee muscovite mica waxay qaataan maadooyinka ceyriinka ee Shiinaha, macdanta waxay ka yimaadeen Lingshou County, gobolka Hebei, Shiinaha. Miinadu waxay leedahay ruqsad macdan. Qalabka ma leh asbestos, bir culus ayaa buuxisa shuruudaha qurxinta.
Dabiiciga Muscovite Mica Powder
WM-60 cad cad 82 ～ 85 150 ～ 170 7 ～ 8 .1 .1 .10 ≤3 ＜ 0.5 60 0.22 dhaldhalaalka hooska indhaha
WM-100 cad cad 82 ～ 85 90 ～ 100 7 ～ 8 .1 .1 .10 ≤3 ＜ 0.5 60 0.22
WM-200 cad cad 84 ～ 89 30 ～ 40 7 ～ 8 .1 .1 .10 ≤3 ＜ 0.5 70 0.20
WM-325 cad cad 84 ～ 89 18 ～ 23 7 ～ 8 .1 .1 .10 ≤3 ＜ 0.5 80 0.16 dhalaal sare aasaaska, hooska indhaha, kareemka BB, kareemka CC, midabka madow
WM-600 cad cad 84 ～ 89 9 ～ 12 7 ～ 8 .1 .1 .10 ≤3 ＜ 0.5 90 0.14
WM-1250 cad cad 83 ～ 88 6 ～ 9 7 ～ 8 .1 .1 .10 ≤3 ＜ 0.5 70 0.12
diidmo midab Adkaanta Mohs Isleeg bartiis daahfurnaan Barta dhalaalida xoog qas daahir ahaanta
650 ℃ Caddaan cad 2.5 75 1475.9 ~ 2092.7 × 6 106Pa 71.7 ~ 87.5% 1250 ℃ 146.5KV / mm > 99.5%
Muscovite Dabiici ah
Huajing miccovite micco fasalka la isku qurxiyo waxay qaataan maadooyinka ceyriinka macdanta Shiinaha, macdanta waxay ka yimaadeen Lingshou County, Hebei, China. Miinadu waxay leedahay ruqsad macdan. Qalabku malaha asbestos, biraha culus waxay buuxiyaan shuruudaha waxyaabaha la isku qurxiyo .Kadib daahirinta, maydhashada, shiidi, qoondaynta haydarooliga, nadiifin heer sare ah, ugudambeyn badeecaduhu waxay leeyihiin faa'iidada jilicsanaanta, jilicsanaanta, iftiinka sare, dhumucda dhumuc weyn, iyo maqaarka saaxiibtinimo .
Wax soo saarku wuxuu dabooli karaa 2 baahiyood oo kala duwan: matte iyo dhalaal. Baaxadda alaabtu waxay u dhaxeysaa 5μm～200 μm Dabcan, alaabooyinka waa la soo saari karaa iyadoo loo eegayo baahida macmiilka ee ah qiimaha nuugista saliidda ama midabka codsi gaar ah .Hadda maalmahan, muscovite fasalka la isku qurxiyo oo inta badan loo isticmaalo aasaaska, hooska indhaha, midabka, iyo budada talcum, iwm.
Maxay Mica Powder ku Leedahay Waxqabadka Qurxinta?
Mica waa badeecad dabiici ah oo dabiici ah oo xasiloonida kiimikada leh waana walax gebi ahaanba aan firfircooneyn, sidaas darteed waa amaan, sun ma leh, waxyeello ma leh oo ku habboon qurxinta. Mica waa mid ka mid ah qaybaha granite, xasilloonida kiimikada waxay la mid tahay tan granite.
Mica wafer wuxuu gaashaan karaa ultraviolet iyo falaadhaha infrared, sidaa darteed waa wakiil anti-ultraviolet aad u fiican oo loogu talagalay qurxinta. Sababtoo ah waa wax dabiici ah oo saafi ah, oo aan sun lahayn oo aan dhib lahayn, waxay leedahay faa iidooyinka ay leeyihiin wakiilada dabiiciga ah ee anti-ultraviolet. Maadaama waferku aad u khafiifsan yahay isla markaana awoodda daboolistu ay aad u xoog badan tahay, in yar oo ka mid ah wax soo saarkaan ayaa loo baahan yahay si loo sameeyo lakab aan la arki karin oo ka-hortagga ultraviolet-ka iyo dhalaalaha dusha maqaarka.
Sababtoo ah mica wafer wuu fiicanyahay oo daboolka maqaarku wuu joogsadaa, ma saameynayso neefsashada maqaarka oo wuxuu maqaarka ka dhigayaa mid raaxo leh.
Qoyaanka ma dhex geli karo mica wafer, kaas oo hor istaagi kara uumiga qoyaanka maqaarka markii loo isticmaalo alaabada qoyaanka.
Awoodda wax soo saarka: 1500ton / bishii
Xirxirida: 500KG / 25KG / 20KG, (PP ama PE bag)
Macnaha Gaadiidka: weelka ama bulk
Xiga: budada mica calcined
Qallalan Dhulka Muscovite Mica
Muscovite Iyo Phlogopite Mica
Qoyan Muscovite Mica